အရပ်ပုပုသေးသေးကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက်များ – Trend.com.mm
အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ရတာ စိတ်ညစ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။နေရာတိုင်းမှာအားသာချက် ၊အားနည်းချက်ဆိုတာရှိပါတယ်။ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတစ်ချို့ဆိုရင်လည်း လူကောင်သေးသေးပုပုလေးတွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ မြင်လိုက်တာနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် လို့ထင်တယ်ဟုတ်!အရပ်ပုပုသေးသေးကောင်မလေးတွေမှာလည်း တမူထူးခြားတဲ့အားသာချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုရင်…
၁)အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးတွေဒေါက်ဖိနပ်အမြင့်လေးတွေစီးရင် အရုပ်လေးတစ်ရုပ်လို ချစ်ဖို့ကောင်းသွားပါတယ်။ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဒေါက်ဘယ်နှစ်လက်မဆိုတာကအစရွေးချယ်လို့ရပြီး ဖိနပ်အမြင့်လေးတွေကြိုက်သလို စီးလို့ရပါတယ်။ဖိနပ်အနိမ့်လေးနဲ့ဆိုရင်လည်း လှနေပြန်ရော။ နှစ်မျိုးလုံးနဲ့လိုက်ဖက်သူလေးတွေပေါ့။
၂)ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်!နေရာယူဆိုရင် အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးတွေ ကိုရှေ့ဆုံးမှာ ထားရပါတယ်။ (အရပ်ပုပု၊အရပ်မြင့်မြင့် ဓာတ်ပုံထဲပါဖို့က အရေးကြီးတယ်လေ 😀 ) အရှေ့ဆုံးမှာဆိုလည်း ကိုယ်က ပုပုသေးသေးလေးဆိုတော့ ဓာတ်ပုံထွက်လာရင် မလှမှာ၊ပုံအကြီးကြီးဖြစ်နေမှာလည်း မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူး။
၃)အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးတွေဆိုတာ ရင်ခွင်မှီအရပ်လေးတွေပိုင်ဆိုင်ထားကြသူပေါ့။ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ်နဲ့အရပ်တူတူဆိုရင် ရင်ခွင်မှီလို့မရတော့ပါဘူး 😛 ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်!
၄)အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးတွေရဲ့ အားသာချက်နောက်တစ်ခုကတော့သူများကိုခိုင်းရတာပါပဲ 😛 ဟိုဟာလေး မမှီလို့ယူပေးပါဦး၊ဒီဟာလေး ယူပေးပါဦးဆိုပြီး ကိုကိုတွေ၊မမတွေကို ညာခိုင်း လို့ရတယ်နော်။Crush လေးနဲ့တိုးရင်လည်း ဇာတ်လမ်းလေးဆင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ အရပ်ပုတဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ရတာ မိုက်တာပေါ့။
၅)ရှိုးပွဲတွေ၊မွေးနေ့ပွဲတွေမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူကဲမယ်ဆို ရင်လည်းကိုယ်ကအရပ်ပုလို့ ဦးစားပေးခံရပြီးရှေ့ဆုံးမှာထားခံရပါတယ်။အရှေ့ဆုံးမှာဆိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေကိုလည်းသေချာမြင်ရလို့ ရှိုးပွဲလာရတာတန်သွားပါပြီ!
၆) အရပ်ပုတဲ့အတွက် အ၀တ်အစားဆိုလည်းရှာရတာမခက်ပါဘူး။ ဒီခေတ်ကြီးမှာကြည့်လိုက်ရင် ကောင်မလေးသေးသေးပုပုလေးတွေချည်းဖြစ်နေသလို အ၀တ်အစားဆိုလည်း သူတို့ဆိုဒ်တွေချည်းပါပဲ။အဲ့ဒီတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အ၀တ်အစားတွေ့ရင်လိုက်ပါ့မလား ဆိုပြီးစဉ်းစားနေစရာမလိုတော့ပါဘူး။ “ဘာဝတ်ဝတ်တင့်တယ်”ဆိုသလိုပဲ။မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေ ၀တ်မလား?ဘာဘီရုပ်လေးလို ၀တ်မလား? ဘောင်းဘီတိုနဲ့စပို့ရှပ်၊ရှပ်အကျီလေးဝတ်မလား? ကဗျာဆန်ဆန်ဂါဝန်လေးတွေဝတ်မလား? ကြိုက်သလိုဝတ်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်ထုတ်ထားသလားထင်ရအောင် စတိုင်လ်မိုက်မိုက်နဲ့ခပ်လန်းလန်းအကျီတွေပါပဲ။
ကဲ အရပ်ပုပုသေးသေးကောင်မလေးတွေရဲ့  အားသာချက်တွေကိုပြောပြီးပြီဆိုတော့ ကိုယ်ကသူများတွေကြားထဲမှာ သေးသေးလေးဖြစ်နေလို့ စိတ်အားငယ်စရာမလိုတော့ဘူးနော် <3
ရုပ်ထုတွေနဲ့ အံဝင်ခွင်ကျရယ်စရာပုံရိပ်တွေ ရိုက်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့…